सामाजिक मिडिया: SAP ग्लोबल सर्वेक्षण (भाग २) | Martech Zone
सामाजिक मिडिया: SAP ग्लोबल सर्वेक्षण (भाग दोस्रो)
सोमबार, अगस्ट 20, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मैले सोशल मिडियामा कसरी रुचि कमायो भन्ने पछाडिको कथा एकदम विस्तृत थियो - जहाँ मैले काम गरें, मेरो जीवनमा मैले के गरें र प्रभावकारी व्यक्तिको लागि मैले के गरें। यति जटिल, वास्तवमा, मैले सम्पूर्ण पोस्ट लेखें मलाई सामाजिक मिडियामा कसरी रुचि भयो। शेलले बढि प्रश्नहरू पार गर्‍यो जुन यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले म तिनीहरूलाई यी उत्तरहरूको उत्तर दिन चाहन्छु।
२ तपाई कुन मिडिया मिडिया उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ?
मुख्य रूपमा, म प्रयोग गर्छु WordPress, Del.icio.us, Linkedin, प्लाक्सो, र जाइकू। म पनि प्रयोग गर्दछु फेसबुक, माइस्पेस, राइज, twitter र शक्ति क्षेत्रीय रूपमा, म पनि प्रयोग गर्दछु IndyMojo र, अवश्य पनि, MyColts.net।
Social. सोशल मिडियाले कसरी तपाईंको व्यवसाय र / वा तपाईंको जीवन परिवर्तन गरेको छ?
मँ सामाजिक मिडिया कस्तो छ भनेर धेरै लेखहरू देख्दछु बर्बाद हाम्रो समय। यी लेखहरू नेटवर्कि ofको दृष्टिकोणमा यति संकुचित छन् र यसले हामीलाई कसरी अधिक उत्पादक बनाउन सक्षम गर्दछ। व्यापार मुख्य रूपमा सम्बन्धहरू मार्फत गरिन्छ ... सोशल मिडियाले हामीलाई विगतमा भन्दा कहिल्यै सजिलैसँग सम्पर्कमा रहन अनुमति दिन्छ।
आज म मेरो कम्पनीको लागि अधिक किफायती आउटबाउन्ड फ्याक्स सेवा खोज्दै थिए। मैले खोजे Del.icio.us र फेला JBlast। अर्को, म हाम्रो नयाँ अफिस स्थानमा फोन लाइनहरू छोड्ने क्षेत्रीय स्रोत खोज्दै छु - म यसलाई लिंक्डइनमा प्रश्नको रूपमा पोष्ट गर्छु। वैकल्पिक भनेको नेट खोजीमा समय लिनु हो, स्थानीय व्यवसायहरू कल गर्दै। आदि, हामी सही जडान बिना धेरै समय बर्बाद गर्दछौं! दिनहरू सम्झनुहोस् जब हामी इन्टरनेटमा चीजहरू खोज्न सक्दैनौं? म गर्छु! यो अचम्मलाग्दो थियो।
मेरो जीवन को रूप मा, यो एक अविश्वसनीय प्रभाव थियो। मैले मेरो हालसालैको कामलाई मेरो ब्लगको माध्यमबाट र सोशल मिडियामा स्थानीय पेशेवरहरूसँग नेटवर्किworking फेला पारे, म यस विषयको क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा बोल्छु र केही क्षेत्रीय गैर-नाफामुखी हुन मद्दत गर्न म धेरै समयदेखि आफूलाई काममा लगाउन खोजिरहेको छु।
Social. मलाई सोशल मिडिया र इन्डियानापोलिस कोल्टहरूको बारेमा बताउनुहोस्। के तपाइँ साँच्चिकै महसुस गर्नुहुन्छ कि सोशल मिडियाले उनीहरूलाई एक सुपरबोबल जित्न मद्दत गर्दछ?
इन्डियानापोलिस कोल्ट्स तपाईंलाई पहिला यो बताउने पहिलो हुनेछ बाह्रौं मानिस सबै खेल जीत गर्न मद्दत गर्दछ। बाह्रौं मान्छे फ्यानलाई जनाउँछ, खेलमा सबैभन्दा ठूलो प्रभावको साथ मैदानबाट बाहिरको व्यक्ति। म आरसीए डोममा छु र केहि खेलहरू हेरेँ र यो प्रशंसनीय शोर र ऊर्जाले फ्यानले खेलमा ल्याउँछ। एक क्षणको लागि तपाईंको आफ्नै जीवनको बारेमा सोच्नुहोस् र कसैले तपाईंलाई विश्वास गर्दछ भनेर एक समय सम्झनुहोस्। यो तपाईंलाई सफल हुने इच्छा प्रदान गर्दछ, हैन? अब कल्पना गर्नुहोस् एक सम्पूर्ण क्षेत्रले तपाईलाई समर्थन गर्दै छ! स्थानीय क्षेत्र भन्दा टाढा त्यस्ता प्रशंसकहरूबारे के भन्न सकिन्छ?
कोल्टहरु को एक लाख भन्दा अधिक मानिसहरु को वेवसाईट को लागी आएका छन्। तिनीहरू मध्ये अधिकांश यहाँ सम्म कि इंडियानापोलिसमा बस्दैनन्! उनीहरूसँग विदेशमा प्रशंसकहरू छन् जसले सबै खेलहरू पछ्याउँछन् र उनीहरूको साइट गैर रोक्दछन्। प्रश्न सोध्न थाल्‍यो, कसरी टोली कसरी प्रत्येक प्रशंसकसँग राम्रोसँग जडान हुन सक्छ र ती फ्यानहरू कसरी एक अर्कासँग राम्रोसँग जडान गर्न सक्छन्? एक सामाजिक नेटवर्क यसको उत्तर थियो। कोच डन्गी अब ब्लग गर्दै छन्! कल्पना गर्नुहोस् ... एक NFL कोच एक टीम का प्रशंसकहरु का साथ सीधा सम्बन्ध संग।
कुनै पनि पेशेवर खेल टोलीको साथ, कोल्टहरू महसुस गर्छन् कि महान् seतुहरू आउँछन् र जान्छन्। दुर्भाग्यवस, केहि प्रशंसकहरू आउँछन् र ती मौसमहरूको साथ जान्छन्। कोल्टहरू एक ब्यापारको साथसाथै एक टोली हो र उनीहरूले प्रशंसक प्रशंसा देखाउँछन् कि भनेर सुनिश्चित गर्न उनीहरूले ठूलो काम गर्नु आवश्यक छ। अन्य व्यवसायहरूमा यसलाई ग्राहक वफादारीको रूपमा चिनिन्छ। कोल्टहरू उनीहरूका फ्यानहरूमा जडित रहन चाहन्छन् ताकि जब कुनै समय प्रशंसकहरू त्यहाँ रहन्छन्। संगठनले गरेको सबै कामका लागि धन्यबाद, तिनीहरू हुनेछन्!
Me. मलाई खाना र रेस्टुरेन्ट उद्योगमा सोशल मिडियाको बारेमा बताउनुहोस्। यो कति प्रयोग भएको छ? यो कसरी अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ?
फूड एण्ड रेष्टुरेन्ट उद्योग एकदम कम्तिमा मार्जिनको साथ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जुन एक उद्योग हो। एक देशको रूपमा, हामी प्राय: बाहिर खाँदै जान्छौं, रेस्टुरेन्टहरू बाँया र दायाँ निर्माण हुँदैछन् ... र पछि व्यवसायबाट बाहिर जान्छन्। कुनै पनि व्यक्ति जो कम्पनीको साथ नियमित रूपमा सँधै मानिन्छ जब तपाईं ढोकामा हिड्नुहुन्छ र कसैले भन्दछ, "हाई डग!"। अनलाइन, यो कुनै फरक छैन। कडा अनलाइन उपस्थितिको साथ रेष्टुरेन्टहरूले टेक-आउट र डेलिभरीमा २०% देखि %०% वृद्धि देखिरहेको छ। यदि उनीहरूले तपाईंको अन्तिम अर्डर वा तपाईंको मनपर्ने प्लेट वा बदामको लागि तपाईंको एलर्जी बिर्सन्छन् भने राम्रो हुन्छ र?
के तपाइँ कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि यो को हो जुन तपाइँको लागि खाना पकाउँदै छ? म पक्का गर्छु! तपाईलाई किन महँगो रेस्टुरेन्टहरूमा शेफहरू यति देखिन्छन्? यो संरक्षकसँगको सामाजिक सम्बन्ध हो जुन सधैं खानेकुराको होईन। खानपान भनेको एक सामाजिक संलग्नता हो, शारीरिक संलग्नता होईन - र रेष्टुरेन्टहरू हराउँदछ जब उनीहरू आफ्नो संरक्षकलाई अनलाइन पहुँच गर्दैनन्। दुर्भाग्यवस, मार्जिनका कारण धेरै मानिसहरू यस उद्योगमा जान चाहँदैनन्। मलाई लाग्छ मान्छेहरु लाई, यद्यपि, एक वास्तविक उत्पाद छ र, यदि प्रयोग गरीन्छ, तिनीहरूले लाभ उठाउनेछन्!
हामी त्यहाँ पुग्नेछौं B2C व्यापार को पक्ष खाना प्रेमीहरू पहिले नै आफ्नै भाग गरिरहेका छन्। चेक आउट गर्नुहोस् सबै व्यंजनहरु, दैनिक मान्छेहरु को लागी एक सामाजिक नेटवर्क। र मान्छे पोष्ट र सोधिएको छ किन त्यहाँ छैन रेस्टुरेन्ट सामाजिक नेटवर्क त्यहाँ बाहिर।
You. तपाई सोशल मिडियाको लागि हार्टल्याण्ड आवाज बन्नुभएको जस्तो देखिन्छ। के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि व्यक्ति र व्यवसायले यसलाई सामान्य सर्तमा कसरी प्रयोग गरिरहेको छ? उनीहरू कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्दैछन्?
हार्टल्याण्ड महान, कडा परिश्रम गर्ने मानिसहरूसँग एक अचम्मको ठाउँ हो। टेक्नोलोजी जहिले पनि एक उपकरणको रूपमा हेरिन्छ तर यहाँ सँधै समाधान हुँदैन। यहाँ इण्डियानापोलिसमा विकास कम्पनीहरूले धेरै उपकरणहरू निर्माण गर्छन् ... विकासकर्ताहरूले केहि कडा हार्डवेयर अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्छन् जुन धेरै उद्योगहरूको मेरुदण्ड हो। जहाँ सिलिकॉन उपत्यका जहिले पनि 'अर्को विचार' को लागी खोजी गर्दछ, यहाँका मानिसहरू अवस्थित व्यवसायहरूलाई काम गर्नका लागि चिन्तित छन्।
नतिजाको रूपमा, सोशल मिडिया अझै आफ्नो बाल्यावस्थामा छ। वयस्कहरूले यी उपकरणहरूलाई खेलौनाको रूपमा हेर्छन्। मसँग साथीहरू छन् कि अझै छैन IM मलाई किनभने त्यस किसिमको सामान उनीहरूका बच्चाहरूले गर्छन्। हाम्रो सिभिक र वाणिज्य उद्योगहरू कुनै पनि टेक्नोलोजीमा पछाडि पछाडि छन्, यद्यपि सोशल मीडिया। हाम्रो विश्वविद्यालयहरू देश मा सबै भन्दा राम्रो हो तर हामी अन्य राज्यहरु को लागी हाम्रो स्नातकहरु हराउँछ किनभने हाम्रो व्यवसाय समुदाय को एक व्यवहार्य व्यापार समाधान को रूप मा सामाजिक मिडिया जस्तै चीजहरु को लागी आफ्नो आँखा खोल्न छैन।
हामी परिवर्तन हुनेछौं, र त्यहाँ समुदायमा केहि मानिसहरू छन् जुन त्यो परिवर्तनलाई ड्राइभ गर्न सक्छ। म निश्चित छु कि म हुँ को आवाज, तर म निश्चित छु कि प्रयास जारी रहन्छ। हामीसँग सिएटल र सान जोससँग प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन भन्ने कुनै कारण छैन। हामीसँग यहाँ छौंलाग्दो स्कूलहरू र जीवनको अविश्वसनीय लागत दिइन्छ!
Let's. सामान्यतया व्यापारको बारेमा कुरा गरौं। के व्यवसाय सानो छ वा ठूलो, मिडवेस्टमा सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दै? कुन हदसम्म?
सम्भवतः टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने उत्तम दृष्टान्त मित्र रोजर विलियम्सको इमर्निप्ट लिडरशिप इन्स्टिच्यूट इण्डियानापोलिसमा छ। क्षेत्रीय युवाहरूसँग सम्पर्कको लागि रोजरले आफूलाई फेसबुकमा गाडेका छन्।
आपतकालिन नेतृत्व संस्थान (इलि) ले इंडियानापोलिस क्षेत्रका युवाहरूलाई हेल्प ईन्डी अनलाइन (एचआईओ) र कम्युनिटी एक्सेस पोइन्ट (सीएपी) कार्यक्रमहरू मार्फत हाम्रो समुदायमा साझेदार बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ। म हरेक हप्ता रोजरबाट eVites प्राप्त गर्दछु ... ऊ एक घण्टामा एक सय माइलमा दगुर्नु पर्छ। म भविष्यमा उसलाई अधिक मद्दतको लागि उत्सुक छु।
प्याट र मैले पनि सुरुवात गरे म इन्डी छान्नुहोस्!, एक साइट जहाँ क्षेत्रीय नागरिकहरू र नेताहरू लेख्न सक्छन्, आफ्नै शब्दमा, किन उनीहरूले मध्य इन्डियानालाई माया गर्छन् भनेर। साइटमा पहुँच खुला छ र कहिल्यै दुरूपयोग गरिएको छैन। कथाहरू रमाईलो छन् - र तीनिहरूले ईन्डीको बारेमा के शानदार छ भनेर औंल्याए। हामी आशा गर्दछौं कि हामी साइटमा अधिक समय बिताउन सक्दछौं - तर मानिसहरू समय-समयमा अनियमित रूपमा पोष्ट गर्न यो स्वच्छ छ। यो धेरै इंडियाना हो!
इन्डियानापोलिस कोल्ट बाहेक, क्षेत्रीय अखबारले सोशल मिडियामा पनि यसको महत्त्व देख्न थालेको छ। चेक आउट गर्नुहोस् IndyMoms, एक शानदार साइट जुन क्षेत्रीय समाचार पत्र चल्छ जुन प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्रीमा फल्छ। म चाहान्छु कि केहि अन्य मिडिया आउटलेटहरू समातिए! हामीसँग यहाँ शहरमा एक उत्कृष्ट वैकल्पिक समाचार पत्र र केहि शानदार व्यापार आउटलेटहरू (प्रसारण र प्रिन्ट) मिल्यो। म विश्वास गर्दछु कि उनीहरूले सोशल मीडियाको माध्यमबाट उनीहरूको प्रवेशमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्दछ।
नोट: म भोली रातमा अन्तिम केहि प्रश्नहरु लाई अनुसरण गर्न प्रयास गर्ने छु!
टैग: विश्वव्यापी सर्वेक्षणSAPएसएपी ग्लोबल सर्वेक्षण
मलाई सामाजिक मिडियामा कसरी रुचि छ?
अगस्ट,, २०१ 21 2007:२१ अपराह्न
१२ औं व्यक्ति भीडको आवाज हो जुन उनीहरू स्पिकरहरूमा पम्प गर्छन्।
स्टिलर प्रशंसक भन्छन… एक दुई सीजन अघि तपाईं लोगहरू चर्को स्वरमा हुनुहुन्थ्यो जब तपाईंले प्ले अफ्सका लागि आरसीए डोममा घुसपैठ गर्नुभयो!